Jiilka labaad ee iPhone XR wuxuu lahaan doonaa 1 GB in ka badan oo RAM ah. Wararka IPhone
Markii sanadihii la soo dhaafay, Apple si tartiib tartiib ah ayuu u kordhay, qadarka RAM ee qalabkaaga, labada iPhone iyo iPad. Xaqiiqdii, RAM waa mid ka mid ah sababaha labada iPhone 6 iyo jiilka 1aad ee iPad Air looga tagay wareegga cusbooneysiinta iOS 13 (labaduba waxay leeyihiin 1GB RAM).
Sida iPad Air 2 iyo iPhone 6s, Apple wuxuu bilaabay inuu kordhiyo RAM-ka qalabkiisa, labaduba waxay lahaayeen 2GB. Xilligan iPhone XS iyo iPhone XS Max waxay leeyihiin 4 GB oo RAM ah, halka iPhone XR uu leeyahay 3 GB, wax umuuqda inay isbadalayaan marka loo eego baaritaanka Geekbench.
Marka loo eego tijaabadan waxqabadka, ee qaabka iPhone 12.1, beddelka iPhone XR, terminalkan waxaa maamuli doona 4 GB oo RAM ah, taas oo xaqiijin karta wararka xanta ah ee ku saabsan suurtagalnimada in Apple ay kordhiso RAM-ka iPhone-ka ugu qaalisan, oo gaaraya 6 GB xasuusta, isla RAM-ka aan hadda ka heli karno 12,9-inch iPad Pro iyo 1 TB oo keyd ah.
1 Awood ka yar sidii la filayay
2 Qualcomm wuxuu la mid yahay Apple waxqabadka
Awood ka yar sidii la filayay
Tijaabadani waxqabadka kaliya ma istaagayso qaybta ku saabsan xaddiga xusuusta ee aan ka heli doonno jiilka labaad ee ugu iibinta badan iPhone, maadaama aan sidoo kale arki karno natiijooyinka imtixaanada waxqabadka processor.
Iyada oo ku saleysan tijaabooyinkan, jiilka labaad ee iPhone XR wuxuu keenaa 5415 dhibcood oo leh hal xudun iyo 11294 oo leh diirkado badan. Tani waxay u maleyneysaa in A13 uu noqon doono oo keliya 12% ka dhakhso badan kan hadda jira ee A12 Bionic. Si kastaba ha noqotee, dhibcaha aad ku hesho udub-dhexaadyo badan ficil ahaan waxay lamid tahay A12 Bionic.
Haddii aan u qaadanno in imtixaankan waxqabadka uu dhab yahay, waxqabadka ayaa ka boodaya A12 illaa A13 midka bixiya kororka ugu yar ee awoodda marka loo eego sanadihii hore. Waxay u badan tahay in Apple ay dooneysay inay diirada saarto hagaajinta isticmaalka tamarta ee boosteejooyinkeeda, iyadoo laga tagayo hagaajinta waxqabadka.
Qualcomm wuxuu la mid yahay Apple waxqabadka
Sanadihii la soo dhaafay, Apple ayaa hogaamineysay waxqabadka processor-yada moobiilka, in kastoo sanadkii la soo dhaafay, ay u muuqato taasi Ragga ka socda Qualcomm ayaa garaacay furaha iyo hadda Snapdragon 855, labadaba jiilka koowaad iyo labaad, amaWaxay bixiyaan waxqabad ka sarreeya A12 Bionic.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Jiilka labaad ee iPhone XR wuxuu lahaan doonaa 1 GB RAM dheeri ah
Podcast 11x02: Betas, amniga, xanta iyo usbuuc loogu talagalay iPhone 11